रामारोशन घटनामा दुवै पक्षले हाले मुद्दा
एल.बी विश्वकर्मा शुक्रबार, भदौ २६, २०७७
यस सम्बन्धी यसअघिको समाचार पनि पढ्नुहोस्
१. दलितसँग प्रेम गरेकै कारण केशरीले गरिन् आत्महत्या, प्रेमी टमट्टालाई निर्घात कुटियो
२.‘काईं आइकन छोरालाई हान्दिन्या हुनकी सोच्दो छौँ’
३. अछाम घटना गुपचुप पार्ने स्थानीय नेताहरुको प्रयास
काठमाडौं– अछामको रामारोशन गाउँपालिका–२ का प्रकाश टमट्टाले आफूमाथि जातीय विभेद र कुटपिट भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा मुद्दा दर्ता गराएका छन् भने केशरी रावलको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
गत बुधबार दलित अभियन्ताको सहयोगमा टमट्टाले मुद्दा दर्ता गराएपछि रावल परिवारले पनि मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । रावल परिवारले वडा नम्बर–२ का वडाअध्यक्ष चक्र रावलको सहयोगमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
भदौ १२ गते प्रकाशलाई प्रेमिका केशरी रावलसँग बसेको अवस्थामा परिवारले फेला पारेपछि स्थानीय युवाले उनलाई र केशरीलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए । कुटपिट भएको भोलिपल्ट केशरी घर नजिकैको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।
त्यसबेला रावल परिवारले समाज बिथोलिने भन्दै घटना गुपचुप राखेका थिए । उता, प्रकाशलाई आफ्नो घरमा चोरी गर्न आएको र ४ हजार चोरी गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर, घटना भएको झन्डै १२ दिनपछि प्रकाशकी आमाको सहयोगमा मुद्दा दर्ता गराएपछि भने उनीहरुले समेत आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
प्रकाश मुद्दा दर्ताका लागि मंगलसेन आउनुपूर्व रावल परिवारले उनलाई बलात्कार केसमा फसाइदिने धम्की दिँदै आएको प्रकाशले बताएका थिए । अहिले पनि टमट्टाको सिंगो परिवार मंगलसेन स्थिति होटलमा बसिरहेका छन् ।
उनले मुद्दा दर्ता गरेपछि आफूमाथि हातपात हुन सक्ने भन्दै उनकी आमा र दुई बहिनीहरु हाल सदरमुकाममै आएर बसेका हुन् ।
सिडिओ अझै अन्जान !
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले अझै यसबारे आफू अन्जान भएको बताउँदै आएका छन् । नेपाली पब्लिकसँगको कुराकानीमा उनले मुद्दा दर्ता भएको तर आफू भने यसबारेमा जानकार नभएको बताएका हुन् ।
‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अहिले प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले भने यो मुद्दाबारे छानबिन सुरु गरिएको बताएको छ । उक्त मुद्दाका बारेमा छानबिन सुरु गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
मुद्दा दर्ताका लागि कैलालीबाट अछाम पुगेका पदम विश्वकर्माको परिवारलाई धम्की आएको बताइएको छ । रावल परिवारको डरले प्रदेश सांसद दुर्गा विकलगायत नेकपा र कांग्रेसका जिल्ला नेताले समेत मुद्दा दर्ताका लागि सहयोग नगरेपछि उनले धनगढीबाट अभियन्ताको टोली लिएर अछाम पुगेका थिए ।
विश्वकर्माका अनुसार सोही ठाउँ माइती भएकी उनकी श्रीमतीलाई धम्की दिइएको थियो । यसको जानकारी उनकी श्रीमतीले फोनमार्फत गराएकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ २१:३९